Ny Avenue, A Murwab Hotel no mandresy ny Hotely Kintana 5 tsara indrindra any Qatar amin'ny International Travel Awards
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny Avenue, A Murwab Hotel dia mandresy ny hotely fandraharahana kintana 5 tsara indrindra an'i Qatar amin'ny International Travel Awards
Ny Avenue, A Murwab Hotel dia mandresy ny hotely fandraharahana kintana 5 tsara indrindra an'i Qatar amin'ny International Travel Awards
ny hotely avenue
NY AVENUE, Hotely MURWAB, GEM miafina an'i DOHA
Loka iraisam-pirenena momba ny dia
Ny Avenue, A Murwab Hotel no lohalaharana amin'ny trano fandraisam-bahiny ankehitriny miaraka amin'ny fifangaroana faran'izay tsara eo amin'ny fiainana.
Sehatra eo an-toerana izy io avy amin'ny Murwab Hotel Group, mpiasan'ny Katara Hospitality. Trano 7 rihana miaraka amina endrika maoderina ankehitriny. Mety ho fananana kely indrindra ao amin'ny vondrona Murwab Hotel misy fahaizan'ny efitrano 170 izy io, saingy feno fahagagana ity hotely ity. Nisokatra tamin'ny 2016 ny Hotely, vaovao amin'ny tsenan'ny fandraisam-bahiny eo an-toerana nefa efa mitarika ny hazakazaka. Iray amin'ny tanjany lehibe ny toerany. any Al Sadd ary azo aleha amin'ny làlambe rehetra sy ny toeram-pizahantany sy tobin'ny orinasa. Manakaiky ihany koa ny kianja fiadiana ny amboara eran-tany 2022.
Ny Avenue, A Murwab Hotel dia nanolotra serivisy hotely miavaka izay mahazo fankatoavana hatrany avy amin'ny tranonkala fitsangatsanganana isan-karazany toa ny TripAdvisor, Booking.com ary ny DRM. Ny Hotel koa dia iray amin'ny fananana Qatar's Multi nahazo mari-pankasitrahana 4 eo ambanin'ny fehikibony, dia ny: TripAdvisor's Lisitry ny safidin'ny mpitsidika 2020, Ny an'i DRM Loka famerenana ny mpanjifa 2020, Ny loka farany indrindra, Famandrihana. Com's Mari-pahaizana Review Review 2021 ary Ilay malaza indrindra amin'izy rehetra, The Avenue, A Murwab Hotel dia nahazo loka Hotely hotely kintana tsara indrindra any Qatar ho an'ny 2020 avy amin'ny Ny loka iraisam-pirenena momba ny dia. Ny fanoloran-tenan'ny Avenue tamin'ny fanomezana ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra dia hita tamin'ny fanamarihana nataon'ny vahinin'izy ireo. Manaporofo fa ny soatoaviny lehibe amin'ny fanomezana serivisy fandraisana vahiny kilasy manerantany dia ao amin'ny ADN'izy ireo.
Raha mahita ny fidinan'ny fivarotana Hotely noho ny areti-mifindra i Qatar, The Avenue, A Murwab Hotel dia manana hafetsena foana amin'ny tanany. Miaraka amin'ny drafitra fitsinjaram-pahefana mitsikera. Ny Avenue, Murwab Hotel dia manohy mampidi-bola. Ary koa, noho ny fahatokisan'ny mpanjifany sy ny vahininy mahazatra, The Avenue, Murwab Hotel dia tafavoaka velona tamin'ny vanim-potoanan'ny aretina ary tsy nanidy varavarana. Misokatra misokatra ho an'ny rehetra mba hanomezana fampiononana sy fiarovana ho an'ireo vahininy. Araka ny nolazain'ny iray amin'ny vahinin'izy ireo, "Avenue no lavitra ny tranoko." Ankoatr'izay, ny fampitaovana mahavariana ao amin'ny Hotel dia manintona ireo fianakaviana hijanona ao noho izany, dia miteraka fidiram-bola sy famerenana tsara hatrany. Nandritra ny fotoanan'ny areti-mandringana dia ny resaka am-bava no fitaovam-pivarotana matanjaka indrindra an'ny Hotely. Mahasarika mpitsidika bebe kokoa ireo fijerena tsara sy tolo-kevitra avy amin'ny vahiny taloha.
Ny Avenue, A Murwab Hotel dia iray amin'ireo hotely voalohany nanamarinana azy Fandaharana Qatar Clean. Manomboka amin'ny kalitaon'ny vokatra ara-pahasalamana mahazatra hatrany amin'ny fizahana fahasalamana sy fiarovana vita hatramin'ny fotoana nidiran'ny vahiny tao amin'ny hotely. Ny fepetra rehetra nataon'ny The Avenue Hotel dia nankatoavin'ny governemanta. Mankamamy ny fahasalamana sy ny fiarovana ny rehetra ny arabe. Ataovy azo antoka fa mahazo aina izay miditra nefa tsy manimba ny fiarovana sy ny fahasalamany.
Ny Avenue, A Murwab Hotel dia nahagaga fa nanolotra karazana kojakoja isan-karazany ao anaty tafo iray izay azon'ireo vahiny ao an-trano ankafizina. Feno amin'ny pisinina, gym, spa, toeram-pivarotana sakafo sy zava-pisotro 5, fivarotana antsinjarany, magazay mety 24 ora, ivon-toeram-pivarotana, na salon lahy sy vavy aza. Ny fanaovana ny Hotel ho malaza tsy ho azy irery ihany fa ho an'ireo mpanjifan'ny fivarotana samihafa ao anatin'ny Hotely. Ny Avenue, A Murwab Hotel dia mety ho kely habe nefa feno ny filan'ny vahiny rehetra.
Rehefa miomana amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA 2022 i Qatar, ny Avenue Hotel dia miara-miasa amin'ny governemanta Qatar amin'ny fanarahana ny fepetra takiny. Ny trano fandraisam-bahiny iray manontolo koa dia miomana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fampiharana ny ambaratonga avo indrindra amin'ny serivisy mba hampisehoana amin'izao tontolo izao fa i Qatar dia iray amin'ireo firenena manan-danja indrindra amin'ny serivisy fandraisam-bahiny. Ny Avenue, Tale Jeneraly ao amin'ny Hotely Murwab, Andriamatoa Shadi Kassem dia tànana mba hahazoana antoka fa milamina ny zava-drehetra amin'ny fanomanana ilay hetsika nandrasana.
Raha vantany vao voalamina ny zava-drehetra, dia manantena mpanjifa Orinasa bebe kokoa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy eo an-toerana ny The Avenue Hotel satria hitombo hatrany ny lazan'ny Hotel.
Ity Hotel efa lehibe ao an-trano ity izao dia mifaninana amin'ireo gadra hotely manerantany ary mahagaga ny fandreseny amin'ny hazakazaka eo an-toerana. Antenaina fa indray andro any, ity marika eo an-toerana ity dia ho lasa gadra iraisam-pirenena noho ny fanaony sy ny finiavany hivoatra.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny The avenue, hotely Murwab dia tsidiho azafady www.avenuedoha.com
Ny fizahan-tany M&A dia mitentina $ 7.52 bn ny telovolana lasa teo